တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် စတေးခံ ၂ % လူသားများ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် စတေးခံ ၂ % လူသားများ…
တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် စတေးခံ ၂ % လူသားများ…
Posted by we R one on Jun 11, 2012 in Copy/Paste, Facebook | 14 comments
*** သောကတွေနဲ့ လုံးထွေးရင်း
ယုတ်မာ ပက်စက်တဲ့ လူတစုက
သူတို့ ရပ်တည်နေကြတဲ့ မြေလွှာပြင်ကို
*** အသက်တွေကို ချွေမွတ်ရုံနဲ့ မကျေနပ်သေး
တနပ်စာကို မီးရှိုးဖျက်စီးရုံနဲ့ မကျေနပ်သေး
အဲ့ဒီ အစတေးခံ လူသားတွေအတွက်
*** ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးတလျှောက်
ကျနော်တို့ ထောပနာပြုခဲ့တဲ့ ဘီဘီစီ
ကျနော်တို့ အားကိုးခဲ့တဲ့ ဘီဘီစီ
မြန်မာပိုင်း အစီစဉ် ဘီဘီစီ ဝိုင်းတော်သားတို့ရေ။
*** အဲဒီ ၂% ရာခိုင်နှုံးထဲမှာ
တနေ့လုပ်ခ လစာနဲ့ မမျှတတာရယ်ကြောင်း
ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်တဲ့သဘော သဘာဝတွေကြောင့်
၄-၅-၆ ရွာက သွေးချင်း ဗမာတချို့ကလဲ
အစတေးခံ ၂% ရာခိုင်နှုံးထဲမှာ
သောကတွေကို ရခိုင်တွေနဲ့အတူ မျှဝေနေကြရတာပေါ့လေ။
*** အဲဒီ ကျူးကျော်သူ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူ တွေကြောင်း
ဘယ်တုန်းက မှတ်တမ်းတွေ လုပ်ခဲ့ကြလို့လဲဗျာ။
ထားခဲ့လို့မရတဲ့ မပြောမဖြစ်ပြောရမဲ့ အရာတခုက
*** ပကတိအနေထားကို ပြောင်းပြန်လှန်ယင်း
ဘီဘီစီ စတာတွေရဲ့ ရပ်တည်ဟန်
ပက်စက်ယုတ်မာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ အကြံဥာဏ်အောက်မှာ
ကျနော်တို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာရဲ့ရန်
facebook မှ ကူးယူဖော်ပြသည်..။
we R one ရေ …ဒီနေ့က စပြီး ရောင်နီပေါ် ပါပြီ တို့သွေးချင်း တောင်ပေါ်သား တွေလည်း သင်တို့ဖက်မှာ ရှိပါတယ် ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီး ကလိမ်ချင် သလို လိမ်လို့ မရတော့ပါဘူး
အခုတော့ သွေးစည်းပါပြီ။ အရေးကြီးတော့သွေးနီးဆိုသလိုပဲ တောင်ပေါ်မြေပြန့်တသားထဲဖြစ် သွားကြောင်းပါ။ နအဖလက်ထက်က ဆောင်ပုဒ်အခုတော့ပြန်သုံးရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ လိမ်နေသည်။
ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ ညာနေသည်။
To we R one, we are always with Rakhine and helping hands to them, so pain…
ကျော်မျိုး ဦး says:
ခွေးကုလားတွေလက်ထဲမှာ သေနတ်တွေရှိနေလို့ ပစ်ကုန်ပြီတဲ့။ စစ်တပ်ဘာလုပ်မှာတုန်း
ဘုန်းကြီးတွေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြတုန်းက ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ကအကောင်တွေ အခုဘာလုပ်နေလဲ.. ဒါကပေါ့သေးသေးကိစ္စမဟုတ်ဖူး.. နိုင်ငံကျူးကျော်ခံရတာ… နယ်ချဲ့ခံရတာ.. အခုပစ်လေ.. ပစ်ချင်လွန်းလို့ လက်ယားနေတဲ့ စစ်တပ်ကကောင်တွေပစ်လေ..
COMMENT တွေကို ပိတ်ချင်ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ သတင်းအမှန်ကိုတော့ အားလုံးကိုချပြစေချင်တယ် post 25 ခုထက် ရှိတဲ့သူတွေပဲ ရေးတာကိုထိုင်စောင့်နေရရင်တော့ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲ ဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေဝင်တာတောင်မသိလိုက်ပဲ နေလိမ့်မယ် စဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ပါ ရွာသူကြီးခင်ဗျား ကြေးမုံတို့ မြန်မာ့အလင်းတို့ မှာသတင်းချန်လှပ်တာ ထက် mandalay gazette ကသာပြီး ဂင်းနစ် စံချိန်ကို ဝင်သွားမှာ စိုးပါတယ်ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေ ဆိုတာ တစ်ချိန်က ဝါးရင်တုတ်နဲ့ တောင် ယိုးဒယား ကိုတက်သိမ်းခဲ့သူတွေပါ အလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်ဇေယျ တို့ လို သူရဲကောင်းတွေ ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီး သတင်းအမှန်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင်ခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ရခိုင်တွေက အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကိုထ်ိပါးခံနေရချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေက သတင်းအမှန်တောင် မတင်နိုင်ခဲ့ ရင် ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် နဲ့ တတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေ ကို အားနာစရာကောင်းလှပါတယ်။
သတင်းအမှန်ကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စောင့်ကြည့် တိုက်ပွဲဝင်သင့်ဝင်ရမယ့်အနေအထားမို့ပါခင်ဗျား မြေမျိုလို့လူမျိုး မပျောက် လူမျိုမှ လူမျိုး ပျောက်မယ်ဆိုတဲ့ စကားလဲရှိတာမို့ မြန်မာ တစ်နိုင်လုံးအတွက် အားလုံး သေချာ ဂရုစိုက် စေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိမ်း လူကြီးဆန်ဆန်ပဲ ပြောတော့မယ်……….
(ရှုး……တိုးတိုး ကျည်ကုန်လို့ အခန်းအနားကလွဲရင် ဘယ်တော့မှထောင်မပစ်တာသိတယ်)
မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခြောက်လိုက်ပါတော့။
အဲဂဒါဆို သဘောပေါက်။ခင်ဗျားတို့ ခြောက်ရုံခြောက်တာ ကျုပ်တို့သိဒယ်။
အဲဒီတော့ တစ်ကောင်မှမကျန်အောင် ခြောက်လိုက်ပါ။
ဘရစ်တစ် ဘင်းဂလစ်ရိုဟင်ဂျာ စင်တာလို့ ပြောင်းစေ
“If we put racial and religious issues at the forefront, if we put the never-ending hatred, desire for revenge and anarchic actions at the forefront…there’sadanger that…the country’s stability and peace, democratization process and development, which are only in transition right now, could be severely affected and much would be lost.”
Read more: http://world.time.com/2012/06/11/will-ethnic-violence-kill-burmas-fragile-reforms/?iid=gs-main-feature#ixzz1xVPpXzCN
စစ်တပ်နဲ့ အမေစု အစိုးရ တို့က နိုင်ငံ တကာ မျက်နှာကြည့်နေရလို့ပါ သွေးချင်းတို့ရေ။
အသေခံလိုက်ကြပါအုံး။ အလွန်သေရလှ ဟိုကသေနတ်နဲ့ဆိုတော့
ရခိုင်တစ်မျိုးလုံးပေါ့။ သေပေးကြပါ သေပေးကြပါ။
မျက်နှာပန်းလှဖို့ ကျုပ်တို့ သွေးချင်းတွေ သေပေးကြပါ။
လိုအပ်ရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးက အမျိုးသားတွေ အားလုံး သေပေးလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ။
နိုင်ငံတကာ က ငတုံးစု ပန်းခွေလေးတွေ လာချပေးကြပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်အမျိုးသားတွေ မသေရဘဲ ဖေရြှင်းရမယ့်နည်းလမ်း မရှိကြဘူးလားဗျာ။
စစ်တပ်က ကြည်ဆံများ အမျိုးခြားသတ်ရန်မဟုတ်
ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ်သာ သတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘုန်းကြီးနဲ့ ပြည်သူတွေကြတော့ အတဲ့ အမျိုးခြားတွေ ကြတော့ မိးပေါ်။
အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့.. မြောက်ပင့်သွေးထိုးစကားလို့ ထင်မိတယ်..
တချိန်ချိန်မှာ.. အဲဒီသေနတ်ပြောင်းတွေဟာ.. ကိုယ့်ဖက်လှည့်လာမယ်.. မတွေးထားဘူးလား..
၁၉၆၂ နဲ့.. ၁၉၈၈ .. ၂ခါ.. လှည့်ခဲ့ပြီးပြီလေ..။
အားလုံးရဲ့ အမြင်မှာ ဘယ်လိုဆိုတာ ဘာဆိုတာ ကိုမဝေဖန်ချင်းဘူး ။ အခုချိန်မှာ သေချာတာကတော့
ဓါးနဲ့ လာခုပ်တာကို ဓါးနဲ့ ပြန်ပြီး မခုခံရင်တောင်မှ ဒိုင်းလောက်တော့ သုံးပြီး ကာကွယ်သင့်တာပေါ့
အဲလိုမှ မဟုတ်ပဲ ၀ါးခြမ်းပြားနဲ့ ဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သေချာ စဉ်းစားပါ ။ရွှေပြည်အေးတရားဟောလို့
ကော ဖြစ်နိုင်သလားလို့ တော်ကြာနွားပလာတာကျွေးသလိုဖြစ်နေပါ့မယ်။အခုဟာက ကိုယ့်ပြည်ထဲမှာကို လာပြီး သက်သက်ကို စော်ကားနှိပ်စက်နေတာပါ ။အရင်က ကုလားတွေမွတ်တွေ ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ အခုတော့ ဘာများပြောချင်လဲ ။စဉ်းစားပါ ……….ဆက်အစော်ကားခံ နေပြီး ကိုယ့်လူတွေ ကုန်တော့မှ မိုးလွန်မှ ထွန်ချ နေအလကားပဲ